Online VOB ka AVI Ntụgharị
Top 5 Free Online VOB ka AVI Ntụgharị
> Resource> Video> Top 5 Free Online VOB ka AVI Ntụgharị
Ị na-achọ a ngwá ọrụ iji tọghata vob (DVD format) ka AVI? Na ị bụ nri ebe a! Isiokwu a ga-agwa gị 5 kasị mma na free online VOB ka AVI Ntụgharị na otu kasị desktọọpụ Ntụgharị ka ị tọghata vob ka AVI online effortlessly. N'ihi na ndị na online converters, ụfọdụ nwere ike kacha file size mmachi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ osobo gị ina, i nwere ike dị free agbalị ha. N'ihi na desktọọpụ otu, e nwere ndị mba format ma ọ bụ file size-agaghị emeli. Ọ bụ ihe vasatail na elu. Ị nwere ike ịhọrọ dị ka gị mmasị. Dị na-agụ n'okpuru iji nweta nkọwa ndị ọzọ.
Wondershare Video Ntụgharị (Desktọpụ Video Ntụgharị)
Gị kacha VOB kwesịrị erughị 100 MB. Ọ bụrụ na ị na-akwụ $ 7 kwa ọnwa, faịlụ size ga-ruo 200MB (7 conversions), mgbe ma ọ bụrụ na ị na-akwụ $ 16, ọ ga-ruo 400MB (10 conversions). Biko gụọ ya isi atụmatụ n'okpuru:
4 isi ọrụ depụtara n'ebe ahụ, converting faịlụ, nbudata faịlụ, eziga faịlụ na ijikwa faịlụ.
Tọghata VOB ka 3g2, AAC, ac3, avi, FLAC, flv, Emmanuel, iphone, iPod, mp3, MOV, mp4, mpg, ogg, WAV, webm, WMV
Online-converters-ahapụ gị tọghata VOB ka AVI online na file size erughị 100MB. Iji tọghata ibu size nke faịlụ, i kwesịrị ya adịchaghị ọrụ. Ugwo rangs si $ 5 ka $ 49 na ya kacha file size mgbanwe site 800 MB ka 1GB. Online-tọghata atụmatụ na:
Mmepụta formats agụnye AVI, MKV, MOV, Flv, MP4, 3GP, 3G2, na wdg
Mmepụta devide agụnye iPhone, iPad, iPod, Android, Blackberry, Wii, PS3, PSP, Xbox 360, na wdg
Na-akwado 3 ụzọ iji tọghata: bulite faịlụ site na PC, tọghata na ibudata vidiyo si na Internet, tọghata faịlụ site na Dropbox.
Convert2mp3 nwekwara ike tọghata AVI ka VOB online. Ọ na-akwado converting vidiyo ma ọ bụ audios na Ịntanetị. Mgbe ị na-convert2mp3, ị ga-ahụ 2 ide igbe. N'ihi na nke mbụ ide igbe, dị nnọọ idetuo video njikọ si YouTube, Dailymotion ma ọ bụ Clipfish. N'ihi na nke abụọ igbe, ọ na-ahapụ gị ọchụchọ video aha, aha, ma ọ bụ na-ese aha ịchọta gị chọrọ video na wuru na-nchọgharị. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ lekwasịrị video format, wee pịa "tọghata".
Ị pụrụ nanị tọghata VOB faịlụ erughị 25 MB na Cellsea. E nwere 2 ụzọ n'ihi na ị na rụchaa covnerision usoro.
Akwado formats: FLV, AVI, MOV, mpg, VOB, MP4, WMV, RM, 3GP, DivX
Wondershare Video Ntụgharị, dị ka a na desktọọpụ Ntụgharị, bụ ọzọ ndị ọkachamara na ndị dị ike karịa ndị ọzọ niile online converters n'elu. Ọ bụ site ugbu a kasị mma desktọọpụ VOB ka AVI Ntụgharị. Echegbu gị banyere format mmachi na max size mmachi ga-ewepụ. Isi atụmatụ ndị dị ka belows:
Ọ dịghị max file size na mmepụta format-agaghị emeli.
Tọghata videos ka 158 formats enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ.
Tọghata 30X ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla converters na ahịa.
Ihe niile na-na-otu video Ntụgharị ka mfe tọghata video na DVD, dezie videos, ọkụ DVD, na ibudata vidiyo si na-ewu ewu video nkekọrịta saịtị.
Mma hazie gị iTunes n'ọbá akwụkwọ site na-agbakwụnye metadata ka fim, TV show na n'ụlọ videos.
Olee otú ịgbanwe MKV ka AVI na Mac / Windows